LEGO 10291 Queer Eye - The Fab5Loft သည်ကြယ်ပွင့်လင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုပေးသည်
LEGO 10291 Queer Eye - The Fab5Loft minifigures များသည်ကြယ်များမှမီးပွားတုံ့ပြန်မှုများ
14 / 09 / 2021 15 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 207 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Lego, LEGO Group, LEGO.com, LGBTQIA +, မဲ Ashton, Queer မျက်လုံး, အဆိုပါ LEGO Group
တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက် Lego 10291 Queer Eye - The Fab5Loft သည်မုန်တိုင်းအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ယူ၍ ပြပွဲမှကြယ်များသည်သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမျှဝေသည်။
A ကြော်ငြာအတို မှ Lego အုပ်စုနှင့် အောက်ပါပုံများ ယင်းကိုအတည်ပြု ကောလဟာလတွေကြာပါပြီ Queer Eye set တစ်ခုမှ အခုဒီ set ကိုလူတိုင်းကြည့်ဖို့ထွက်လာပြီ၊ build နဲ့ show နှစ်ခုလုံးရဲ့ကြယ်တွေကသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဖော်ပြနိုင်တယ်။
စီးရီး၏ဌာနေအတွင်းပိုင်းနှင့်အိမ်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ Bobby Berk သည် Beck ၏ Rock song 'Loser' တွင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လှည့်ကွက်ကိုတင်ပြီးသီချင်းစာသားများကို 'ငါတစ် Lego ကလေး၊ ဒါဆိုငါ့ကိုဘာလို့မဆောက်တာလဲ။ ' အဆောက်အ ဦး သစ်အတွက်ပရိုမိုးရှင်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် tweet တစ်ခု။
“ ငါက Lego မှ ကလေး၊ ဒါဆိုငါ့ကိုဘာလို့မဆောက်တာလဲ " https://t.co/XvMrELTD0V
- Bobby Berk (@bobbyberk) စက်တင်ဘာလ 14, 2021
Jonathan Van Ness သည်သူတို့၏လက်မှတ်အာမေationိတ်နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သင်ယုံနိုင်သလား။ သူတို့ရဲ့ minifigure ရဲ့အကောင်းဆုံး bits တွေအားလုံးကို clip တစ်ခုနဲ့ Lego show ရဲ့ intro ဗားရှင်း JVN ၏ဆံပင်လှန်ပုံနှင့်ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို၎င်းတို့စုံလင်စွာဖမ်းစားသည် Lego Mini-Me ရဲ့ဟာသ
မင်းယုံနိုင်လား!? ငါတစ် Lego မှ!! Queer Eye set မကြာမီလာမည် @LEGO_Group pic.twitter.com/qkd2vSjjLT
- Jonathan Van Ness (@jvn) စက်တင်ဘာလ 14, 2021
set of designer Matthew Ashton သည်အထင်ကရဆံပင်လှန်ခြင်းကိုချီးကျူးကာ Jonathan ၏ post ကို retweeted လုပ်ခဲ့သည်။ သူကိုယ်တိုင်နှင့် Jonathan တို့၏ selfie ပုံကိုဝေမျှကာ 'အဲဒါကဘယ်ကစတာလဲ ... ' ဟုရေးသားခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်မော်ဒယ်အကြောင်းအစောပိုင်းအစည်းအဝေးများသို့ရည်ညွန်းနိုင်သည် ပြီးသားအတည်ပြုခဲ့သည် ယင်းကြောင့် Lego အဖွဲ့နှင့်လိုင်စင်အေဂျင်စီ IMG သည်တည်ဆောက်မှုအတွက်ကန ဦး စိတ်ကူးကိုအနီးကပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အိပ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်! ပြီးတော့ @jvnပလတ်စတစ် #လီဂို ဆံပင်လှန်ခြင်းသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည် !!! @LEGO_Group # lego #မေး
အရာအားလုံးကစတင်ခဲ့တဲ့နေရာ…။ https://t.co/QgdqwabowX pic.twitter.com/mCLr5qOV9f
- Matthew Matthew (@matthew__ashton) စက်တင်ဘာလ 14, 2021
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်£ 1 / $ 89.99 / € 99.99 ဖြင့်စတင်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ In-depth ပြန်လည်သုံးသပ်.
← Room Copenhagen မှ LEGO ပရိဘောဂများအတွက်အွန်လိုင်းစျေးနှုန်းများကိုဖော်ပြထားသည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Gandalf the Grey →